Ababambisene ne-V-Nova nge-Simplender ye-MVMO entsha ye-Pan-African Broadcast Service - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » Ababambisene ne-V-Nova nge-Simplender ye-New Pan-African Service Service MVMO
Ababambisene ne-V-Nova nge-Simplender ye-New Pan-African Service Service MVMO
• Ubuchwepheshe bokukhulisa i-P + codec bunika amandla i-MVMO ukukhulisa kakhulu izilaleli zayo ukufinyelela kumanethiwekhi eselula ezwenikazi lonke
• Ipulatifomu elula ihlanganisa i-P + ukuletha insizakalo ezonika amandla ividiyo ephezulu kakhulu kuwo wonke amanethiwekhi ukusuka ku-2G kuya ku-5G
I-MVMO izosiza inkundla yokusabalalisa ukuxhumana nabakhiqizi bokuqukethwe abazimele kanye nabalaleli babo kanye nokuxhasa ukukhula kwezimboni zokudala kulo lonke elase-Afrika.
London, UK - 11 Septhemba 2019 - V-Nova, umhlinzeki oholayo wezobuchwepheshe bokunciphiswa kwevidiyo, ujabule ukumemezela ukuthi ungumhlinzeki oyisihluthulelo wensizakalo entsha yokusakaza entsha, i-MVMO, ngenxa yokuqalisa e-Afrika ngasekupheleni kwe-2019. Ukusebenzisana nephayona le-TV ye-OTT elandelayo Okulula kakhulu, insizakalo izohlanganisa ukuthuthukiswa okuphezulu kwe-V-Nova P + codec-agnostic kanye nesikhulumi sokusakazeka okulula ukusabalalisa okulula ukulethela okuqukethwe okuphezulu kwekhwalithi ephezulu kuzithameli ezwenikazi lonke.
I-P + isekela izinga lokuncintisana elizayo le-MPEG-5 Part 2 LCEVC, okusho ukuthi i-MVMO izokuba ngelinye lamapulatifomu okuqala ukuyisebenzisa. Nge-MVMO, kuzokwazi ukubuka ividiyo noma kuphi lapho kunophawu lwefoni, olunamandla amakhulu njengoba isidingo sokuqukethwe okusakazwayo kukhula kulo lonke elase-Afrika.
I-MVMO (ama-Movie, i-Video, i-Music, i-Opportunity), isiteji sokusabalalisa esakhiwe ngokubambisana neCreative Africa Exchange (CAX), okuyindawo yemakethe yomkhakha wokudala namasiko, oxhaswe yi-Afreximbank. I-MVMO isethwe ukusiza ukuhlanganisa isidingo esisheshayo sokuqukethwe okuphezulu kakhulu kokusakazwa e-Afrika. Isivele izama ezindaweni eziningi ngaphambi kokwethulwa ngokusemthethweni kweNigeria, namanye amazwe okuzoqinisekiswa maduze, i-MVMO isebenzisana nabanikezeli abakhulu bokuqukethwe bomhlaba wonke, kufaka phakathi i-Times Multimedia I-TMM njengendaba yezindaba ezizimele zesikhulumi, kepha izonikeza nengqayizivele yabakhiqizi abazimele ukuthi bashicilele futhi benze imali ngokuqukethwe kwabo ukusekela izimboni zokudala zase-Afrika ezikhula ngokushesha.
Ukutshalwa kwezimali kwingqalasizinda yamaselula e-Afrika kuyaqhubeka kuphikisana namanye amanethiwekhi we-5G asezofika kepha abantu abaningi basaqhubeka nokuthola i-2G noma i-3G. Ukunikeza ikhwalithi yevidiyo enamandla kakhulu kumakhompiyutha aphansi kakhulu nekhwalithi ehlukile lapho kungenzeka ngakho-ke kubalulekile.
Ngokusho kwesikhulu esiphezulu se-V-Nova kanye noMsunguli woMdidiyeli uGuido Meardi, "ipulatifomu emangalisayo ka-Simpliking iguqule ukusatshalaliswa kokuqukethwe futhi iyaqhubeka nokuthola isisekelo esisha ekusungulweni kwemisebenzi yokusakaza entsha. Ilabhulali yethu ye-P + software ibalulekile enokwenzeka kule sevisi ngoba ivumela abantu ukuthi bathokozele ividiyo noma kumanethiwekhi we-2G nge-bitrate ye-100 Kbps kuphela kodwa futhi inika ikhwalithi ephezulu ngokugcwele HD at 1Mbps. Ukuhlanganisa i-P + endaweni yesikhulumi seS Simplender kuzovula amathuba emhlabeni jikelele. ”
UDan Finch, oyiChief Commerce Officer weSpecider, uyaphawula: “Sijabule kakhulu ukubambisana ne-MVMO neV-Nova ekuthuthukiseni nasekwethulweni kwale nkonzo entsha ethokozisayo. Sibona amathuba amaningi wobuchwepheshe be-V-Nova's P + ukunika amandla abathengi abaningi kanye nekhwalithi ephezulu yensiza ezindaweni ezinjenge-Afrika encike kakhulu kumanethiwekhi weselula. Sihlanganiswe nemiklomelo yethu yokuwina umklomelo wokuqeda ukusakazwa kwesiteji, manje eseyamukelwa kabanzi e-EMEA, siyaqiniseka ukuthi le sevisi izoba ukwengeza okuhle emkhakheni we-TV we-OTT e-Afrika. ”
Sandra Iyawa, I-CEO ye-Times Multimedia Isikhulu Esiphethe Okuqukethwe kwe-MVMO, siyanezela: “Ukuhlanganiswa kobuchwepheshe beSpecider kanye ne-V-Nova kusinikeze isiteji sokusebenza sokusebenza esisasebenza futhi esisebenza kahle esisivumela ukuthi sifinyelele izethameli eziningi ezingenamuntu kuyo yonke inethiwekhi yeselula. Sizobe sethula i-MVMO emcimbini wamazwe e-CAX wangempelasonto eKigali, eRwanda ngoDisemba futhi silangazelele ukwamukela ababukeli bethu bokuqala kule nkundla entsha ekhethekile. ”
Ngeminye imininingwane ngokuvakasha kwe-CAX cax.africa/.
I-V-Nova, inkampani esekelwe eLondon ne-software yaseLondon, inikezelwe ekuthuthukiseni ukucindezelwa kwedatha ngokwakha iphothifoliyo enkulu yobuchwepheshe obusha ngokusetshenziselwa ukuguqula ukusetshenziswa kwe-AI nokusebenza okufana kwemininingwane, ividiyo, imaging, ukuvumelanisa amafu, izinhlelo zokusebenza kuma verticals amaningana.
Lokhu kufinyelelwa ngokusebenzisa ubunzulu be-R & D (i-300 + yamalungelo obunikazi aphesheya) kanye nokuthuthukiswa kwemikhiqizo evivinya, ifakazise futhi iqhubeke ngokuqhubekayo iphothifoliyo yezobuchwepheshe.
Abakwa-V-Nova bakhiphe izixazululo ezimbili zokuqophisana ezisebenzayo: I-P + iyilabhulali yokuqala yesoftware eyenzelwe kahle kakhulu yokufaka ikhodi nokusakaza okuthuthukisiwe kwamavidiyo evidiyo nge-MPEG-5 Ingxenye 2, ephansi nobunzima bokukhulisa ikhodi (LCEVC). I-PPro ilabhulali yesoftware ephezulu esebenza kahle ye-AI SMPTE I-VC-6 (ST-2117) esetshenziselwa ukukhiqizwa kokuhamba komsebenzi ochwepheshe kanye nezinhlelo zokusebenza zokucabanga.
I-V-Nova isungule imikhiqizo eminingi ewina umklomelo ukuze iqale imvelo ngobuchwepheshe bayo futhi ivumele ukuthunyelwa kwayo ngokushesha, ikhuluma ngamacala okusetshenziswa ku-TV, abezindaba, ukuzijabulisa, amanethiwekhi omphakathi, i-eCommerce, i-ad-tech, ukuphepha, indiza, ukuzivikela, izimoto kanye nemidlalo.
Imodeli yebhizinisi lakwa-V-Nova ukwenza imali ngobuchwepheshe bayo ngokusebenzisa amalayisense esoftware, amakhosi we-IP nokuthengisa umkhiqizo.
I-Tel: + 44 7810 846364
I-Simplitter, okuyinkampani eyakhanda eLondon, ingumholi bukhoma, bukhoma-2-VOD nezinsizakalweni ze-TV ezifunwayo kuwo wonke amapulatifomu we-OTT. Kusungulwe i-2010, i-Simphiwender inika amandla abasakazi, opharetha besiteji, abanikazi bokuqukethwe kanye nabasabalalisi ukuthi bavule ngokushesha izinsizakalo ze-TV ezizukulwane ezizayo, okufinyeleleayo nokwandayo kwemali engenayo. I-Simplender ihlinzeka ngokusebenza okulula nokwenziwa okusetshenziselwa amafu kubaholi bezimboni, kufaka phakathi i-A + E Networks, i-AMC Network International, i-Channel 4, i-News Corp, Sony, I-UKTV, ne-QVC.
Oxhumana nabo abezindaba:
I-Platform Communications ye-Simplestream
5G I-Cobalt Encoder Umnikelo I-Creative Africa Exchange MPEG-5 Ingxenye 2 LCEVC MVMO Ott P+ Okulula kakhulu I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows Ukusakaza Times Multimedia TMM I-TVU Izinethiwekhi I-Ultra HD Forum V-Nova Ukucindezelwa kwevidiyo	2019-09-11
Ngaphambilini: I-ESL ikhetha i-Intinor yemicimbi ye-flagship esports
Olandelayo: Ama-DPA Microphones Apha Abasabalalisi eSerbia naseCroatia